Kucelwe umncwaningi aphenye ngo-R81m 'okhokhelwe umngani kaZuma' | News24
Kucelwe umncwaningi aphenye ngo-R81m 'okhokhelwe umngani kaZuma'
Cape Town – UMncwaningimabhuku Jikelele uzocelwa ukuba aphenye ukuthi kungani umgani kaMengameli Jacob Zuma, uPhilani Mavundla, akhokhelwa isamba semali engu-R81m ngaphambi kokuba enze umsebenzi wokumoma i-acid emayini.
Lesi sicelo sizofakwa yiDemocratic Alliance (DA), negxeke kakhulu lokhu kukhokhelwa ngeSonto.
Le nkinsela kasomabhizinisi osemkhakheni wezokwakha yake yaphakamisa ukuthi izokhokhela uMengameli Zuma imali okwakuzomele ayikhokhe ngokuqiniswa kwezokuphepha emzini wakhe oseNkandla.
“Yize izivumelwano zokufukulwa zikubandakanya ukukhokhelwa ngaphambi komsebenzi njengoba iningi lezinkampani eziwina amathenda zingahlale njalo zinemali yokwenza umsebenzi, kulesi simo ohlomulile umgani kaZuma omkhulu ocebe kakhulu, ongakudingi noma okungamfanele ukukhokhelwa ngaphambi komsebenzi,” kusho uLeon Basson, oyiNhloko yeDA kwezaManzi kanye nokuThuthwa kweNdle.
OLUNYE UDABA: OwayenguNgqongqoshe udalule ukuthi uMolefe ‘wawasiza’ kanjani amaGupta
UBasson uthi iDA ifuna ukuthi uMcwaningimabhuku Jikelele aphothule uphenyo bese kushushiswa bonke labo abathintekayo ngokuphula imithetho yombuso yokukhishwa kwamathenda.
Lokhu kulandela imiqingo yamaphepha edalulwe kwiCity Press, nekhombisa ukuthi inkampani kaMavundla, ngokubambisana nenye, yakhokhelwa kanjani u-R81m ngaphambi kokuthi iqale ukwenza umsebenzi – nokuyinto engavumelekile ngokomthetho iPublic Finance Management Act (PFMA).
Isikhulu esiphezulu eHhovisi loMgcinimafa, esikhulume neCity Press kodwa sangafuna ukudalulwa, sithe: “Ayikho indawo kanye nesikhala sokukhokhelwa ngaphambi komsebenzi kwi-PFMA”.
Sithi ngokujwayelekile inkampani iyaye yenze umsebenzi bese kuba yima ikhokhelwa ngomsebenzi ewenzile, hhayi ukuthi ivele ikhokhelwe imali ingawenzanga umsebenzi.